प्रतीतपत्र अर्थात् एलसी भनेको के हो ? बैंकिङ प्रक्रियामा के छ यसको महत्व ? ~ Banking Khabar
प्रतीतपत्र अर्थात् एलसी भनेको के हो ? बैंकिङ प्रक्रियामा के छ यसको महत्व ?
पोखरेल बैंकर हुन् ।